China Sponge media abrasives orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | TAA
Mampijaly ny haino aman-jery spaonjydia vondron'orinasa media mahatsikaiky miaraka amin'ny spaonjy urethane ho toy ny adhesive, izay manambatra ny fahafaha-mitazona ny sponjy urethane miaraka amin'ny hery fanadiovana sy fanapahana an'ireo haino aman-jery nentina nanapoahana fako. Mihosin-drindrina izy io mandritra ny fotoana misy ny vokany, mampiharihary ny habeny amin'ny atiny sy ny mombamomba azy noforonina. Rehefa mandao ny tampony, ny spaonjy dia mivelatra amin'ny habe mahazatra ka miteraka banga mandoka ny ankamaroan'ny loto, ka manatsara ny tontolo fipoahan'ny fasika.
Ny andiany be mpampiasa indrindra dia ny andiany TAA-S miaraka amina oksida aluminium ary andiana TAA-G miaraka amina vy.
Karazana mombamomba Agent Media mahery vaika Fampiharana
TAA-S # 16 ± 100 micron Aluminium Oxyde # 16 Haingam-pandeha sy mahery setra amin'ny rindrina indostrialy henjana.
TAA-S # 30 ± 75 micron Aluminium Oxyde # 30 Fanesorana fonosana multilayer ary mombamomba ny mikrô 75.
TAA-S # 30 ± 50 micron Aluminium Oxyde # 80 Mahomby amin'ny rindrina laryers iray na roa ary profil to50 micron.
TAA-S # 30 ± 25 micron Aluminium Oxyde # 120 Mahomby amin'ny harafesina maivana sy antonony, mamokatra profil micron 25.
TAA-S # 30 <Micron 25 Aluminium Oxyde # 220 Ho an'ny fanesorana jiro maivana na hametrahana profil kely.
TAA-G-40 + 100 micron Steel Grit G40 Esory ny sarona sarotra indrindra. Ho an'ny fanomanana ambonin'ireo faritra mihasimba sy amin'ny fanalana elastomerika na fonosana hafa faran'izay mafy.
1. Ny lozisialy media spaoro vita amin'ny sponjy polyurethane dia vaky ambany sy maharitra kokoa ary mety hanakana ny fandotoana vovoka izay nateraky ny fahatapahan'ny abrasives.
2. Ny fitaovana spaonjy dia mitroka ireo loto ao anaty (refin'ny mill, grease, sns) ary manatsara ny fahadiovan'ny faritra misy azy io.
3. Mihamatanjaka ny fiarovana ny mpiasa ary mihena ny risika toy ny ratra amin'ny maso sy indostrialy noho ny fihenan'ny sponjy porous.
4. Ireo kilema tsy dia misy kalitao sy fanamboarana ambany
5. Fitsaboana avo lenta amin'ny faritra marefo sy voafaritra
6. Mandrakizay maharitra ny coco, mampihena ny vola lany.
8. Ny fitaovana fanapoahana fasika dia kely amin'ny habe ary azo entina ary mety amin'ny fanadiovana ny faritra tery sy ampahany manokana.
9. Ity tontolo iainana sariaka, azo antoka ary mahomby vaovao ity dia mitondra tranokala madio sy somary hita maso.
1. Ny haino aman-jery spaonjy sponsora roa sosona dia aseho amin'ny alàlan'ny rafitra rafitra-rivotra
2. Mandratra ny haino aman-jery spaonjy
* Mitroka ny angovo fifandonana, mihosotra ary manafoana ny famoahana ireo loto maloto mihalefaka
* Aharihary ny marokoroko, esory ny kontinanta
3. Rehefa mandao ny tampon'ny, ny Fampitam-baovao momba ny spaonjy manitatra miverina amin'ny habe mahazatra mamorona banga mihinana ny ankamaroan'ny vovoka sy loto
Ampiasaina betsaka amin'ny Marine, Engineering any ivelany, miaramila, tetik'asa petrokimika, Aerospace & Aviation, Herinaratra nokleary, famerenana amin'ny laoniny ny tantara, fanadiovana rindrina, fikojakojana trano sns.
Teo aloha: Mitondra vy grit
Manaraka: Fitotoana kodiarana FW-09 andiany
16 # Sponjy Media Abrasives
Media malefaka malefaka
Malefaka spaonjy spaonjy
Sponjy Jet Blasting
Sponjy Jet Blasting Media Abrasive
Sponjy Jet Blasting Media
Sponjy Jet Silver 16
Sponjy Jet Technology
Sponjy Media Abrasives
Sponjy Media Silver 220 #
Sponjy Media Silver 30 #
Sponge-Jet fanapoahana amidy
Tombony ■ madio sy malefaka, tsy maratra amin'ny marin-taribin'ny asa. ■ hamafin'ny mekanika avo lenta, hamafisana, malefaka ■ azo ampiasaina indray imbetsaka, ny vokany mitovy ary tsy mora vaky. ■ haben'ny fanamiana, aorian'ny famafazana fasika manodidina ny fitaovana hitazonana ny vokan'ny famirapiratana mitovy, tsy mora ny mamela mari-drano. ■ fahadiovana avo lenta sy kalitao tsara mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. ■ fananana simia miorina, fa tsy mandoto ny met ...
Endri-javatra * Azo ampiasaina hanoloana fasika mineraly isan-karazany & abrasives tsy metaly, toy ny corundum, silikôida karbida, quartz tsy miangatra, vakana fitaratra, sns. * Famoahana vovoka ambany, fanatsarana ny tontolon'ny asa, tontolo iainana. * Afaka manolo ny ampahany amin'ny fizotran'ny pickling. * Famoahana vovoka ambany sy tontolo iainana miasa tsara, mampihena ny fitsaboana ny fako pickling. * Vidiny feno feno, ny androm-piainana dia 30-100 fotoana izay ...
Fambolena simika C 0.85-1.20% Si 0.40-1.20% Mn 0.60-1.20% S ≤0.05% P 00.05% Hamafin'ny HRC 40-50 Mikraostrika homogenène mitongilana Martensite na hakitroky Troostite ≥ 7.2g / cm3 endrika ivelany Spherical Hollow particles <10% Fizarana haben'ny efijery No haben'ny efijery S70 S110 S170 S230 S280 S330 S390 S460 S550 S660 S780 S930 6 0.132 3.35 ...